Banyere Anyị - Changyi Luhong Plastic Machine Co., Ltd.
160L 1-3 n'ígwé mepere igwe na-akpụzi ihe n'elu
220L 1-3 Layers Ugboro Abụọ Mgbanaka Chemical Drum Blow Molding Machine
200L-10000L Water Tank na-akpụzi igwe
Igwe eji akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ
Changyi Luhong Plastic Machine Co., Ltd., raara onwe ya nye n'ichepụta na imepụta igwe na-akpụ akpụ zuru oke site na 10L-20000L,1-6.N'ihe karịrị afọ 30 mmepụta ahụmahụ, a na-eji LHBM extrusion igbu ịkpụzi igwe maka ịmepụta PE & HDPE mmiri nchekwa tank, plastic pallet, ụzọ mgbochi ụzọ, 1000L IBC tank, okpukpu abụọ mgbanaka, ihe mkpofu, kayak, anyanwụ mat na ndị ọzọ oghere. ngwaahịa plastik.
Anyị guzobere na 1985, nke dị na Weifang City-Kite Capital of the World, Shandong Province, na-ekpuchi mpaghara 500,000㎡, ụlọ ọrụ 3, ndị ọrụ 120, gụnyere ndị injinia 10 dị elu na R & D, injinia ọrụ 15 maka mgbakọ na ọzụzụ.Dị ka otu ọkachamara na-emepụta igwe na-akpụzi ihe, mgbe ọ na-abịa n'ịkpụzi ihe ọhụrụ extrusion, ịkwesighi ile anya karịa Luhong Blow Molding Machine.Ugbu a, igwe na-akpụ akpụ akpụ akpụ gụnyere Water Tank Blow Molding Machine, Chemical Drum Blow Molding Machine, IBC Tank Blow Moding Machine, Pallet Blow Molding Machine, Kayak Blow Molding Machine, Machine Barrier Blow Molding Machine, Floating Dock Blow Molding Machine wdg.
Teknụzụ na ọrụ anyị na-asụ ụzọ emeela ka anyị bụrụ otu n'ime ndị isi nke ụlọ ọrụ plastik maka afọ 30.Ndị ahịa anyị nọ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche abịawo na-adabere na ihe ọmụma na ahụmahụ nke ika nke na-anọchi anya ma àgwà na ntụkwasị obi.
Ugbu a, Luhong Blow Molding Machine abanyela nke ọma n'ahịa mba ụwa.Na ezigbo igwe mma na nrụ ọrụ igwe, gbakwunyere ọrụ azụmaahịa zuru oke, anyị enwetala otuto nke ukwuu site n'aka ndị ahịa sitere na mba 30 n'ụwa niile dị ka Thailand, Indonesia, India, Pakistan, Russia, Nigeria, Viet Nam, Mongolia, UAE , Mexico, Bangladesh wdg Anyị ji ezi obi na-atụ anya nwere ike na-akwado gị maka mmeri-emeri azụmahịa.
N'ime nyocha nke igwe na-akpụ akpụ, a na-eji nwayọọ nwayọọ guzobe mkpụrụ ndụ mmepe pụrụ iche, na-eme ka mgbanwe si na ụlọ ọrụ mmepụta ihe gaa na ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nkà na ụzụ, na-eduga mgbanwe na nkwalite nke ụlọ ọrụ na-akpụzi machibe na nkà na ụzụ ọhụrụ.
Omenala ụlọ ọrụ Luhong nwere mmetụta dị ukwuu na ọdịnihu na mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ.Ọhụụ anyị bụ ime ka ị nwee ike ịga nke ọma.Ebumnuche anyị bụ ịnọgide na-emeziwanyewanye, soro na imezu ihe ị chọrọ.Ụkpụrụ anyị bụ isi bụ iguzosi ike n'ezi ihe, ihe ọhụrụ, imekọ ihe ọnụ.
Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara anyị, pls nweere onwe gị ịnye ogbunigwe oge ọ bụla.
Ihe kpatara ịhọrọ Luhong
♦ Ebe ọ bụ na 1985, N'ime 36 afọ emebe & n'ichepụta ahụmahụ na igbu ịkpụzi igwe ụlọ ọrụ.
♦ 30+ Paetns, dị ka ndị nrụpụta kacha elu, ndị injinia R&D anyị etinyela akwụkwọ ikike 30+ iji melite igwe na-akpụzi ihe.
♦ 15+ Mgbe ndị injinia na-ere ahịa dị njikere maka ngwọta n'ime 24hrs.
♦ 12+ International Top Brand Components iji mesie gị ike na igwe ahụ dị.
♦ 7/24 Ọkachamara tupu ire ere na mgbe ọrụ ire ere
Ngwa kachasị mma
Mpụta igwe maka ntụaka gị
Tinye: Shibu Industrial Park, Changyi City, Shandong Province, China-261315